Unomdla malunga ne-Islam kunye noluntu lwamaSilamsi
Ubuzile: AmaSilamsi anjani amazwe angamaSilamsi?
Udidi: Theology 0
Leliphi elona lizwe lilungileyo lamaSilamsi ehlabathini? Abona bantu baninzi bamaSilamsi kwilizwe e-Indonesia, ilizwe elihlala kwi-12.7% yamaSilamsi ehlabathi,…
Yiyiphi i-Eid Al Adha echanekileyo okanye i-Eid ul Adha?
U-Eid-ul-Adha unokupelwa ngokuthi ʾId al-Adha okanye Eid-ul-Adha. Idla ngokubizwa ngokuba yi-Eid. Nangona kunjalo, i-Eid inokubhekisa komnye umnyhadala, i-Eid-ul-Fitr, eyenzeka…
Eyona mpendulo ingcono: Ithini iSilamsi malunga nokuncoma?
Uthini xa umntu ekuncoma kwi Islam? Ngapha koko, ukuba umntu uyakuncoma, yithi enkosi, kwaye uthi “alhamdulillah” (lonke uzuko malube...
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iviniga iHalal okanye iHaram?
Impendulo ekhawulezileyo: Iviniga yewayini kunye neviniga yebhalsamu zithathwa njengeHaram njengoko ziqulethe isixa esikhulu sotywala. Zonke ezinye iintlobo zeviniga zithathwa njengeHalal. Ngaba...
Mangaphi amaxesha eNyanga ekhankanywe kwiQuran?
Ngaba iQuran ikhankanya inyanga? IQuran igxininisa ukuba inyanga luphawu lukaThixo, hayi ngokwayo uthixo. Wathini uAllah ngenyanga?…
Yeyiphi inkqubela eyakhokelela kuyo ixesha legolide lamaSilamsi?
Izazinzulu ziye zaphucula ialgebra, icalculus, ijometri, ikhemistri, ibhayoloji, amayeza nenzululwazi ngeenkwenkwezi. Uninzi lweendlela zobugcisa zakhula ngexesha leSilamsi seGolide, kubandakanya iiseramics, isinyithi, amalaphu, izibane ezikhanyayo…
Ngaba iNizams yayiyiShia okanye iSunni?
Nangona uAsaf Jahs (Nizams), abalawuli beLizwana laseHyderabad yangaphambili, babengamaSilamsi angamaSunni, baqhubeka beyixhasa isikhumbuzo seMuharram. Kwakungexesha labo apho iikoloni ezikhethekileyo ...
Umbuzo wakho: Kutheni iKaaba ingesiso isithixo?
Thina maSilamsi asinquli isithixo saseMecca. Asiyibizi nokuba yi-Idol. Lilitye elaqanjwa nguMprofeti uMohammed eMecca eyona njongo...
Impendulo eKhawulezayo: Ithini iQuran ngamalungelo omfazi?
KwiQuran engcwele (SWT) u-Allah uye wachaza ngamalungelo ekhazi kumfazi. “Kwaye banike abafazi ikhazi labo njengesipho. Emva koko, ukuba ba…
Umbuzo oqhelekileyo: Zeziphi iinkokeli ezimbini ezalwela ukuthabatha isixeko esingcwele saseMecca kwiiOttomans ngowe-1803?
Baye bavuka njengentlangano yonqulo eDira'iyya eNejd ngo-1744-1745. Imfundiso yabo yafumana abaxhasi abambalwa kwi-Hejaz, kwaye uMufti waseMecca wabiza ...
1 2 ... 837 Okulandelayo
Usuku oluhle kubo bonke! Igama lam ndinguAmir. Le yibhlog yam malunga ne-Islam kunye nehlabathi lamaSilamsi. Ibhlog yam iya kuba namanqaku malunga neSilamsi ngokwembono yenkolo, kunye nakwimbono yezinye iinzululwazi ezifana nezifundo zenkolo, intlalontle, izifundo zenkcubeko, iilwimi, njl., njl.
Ngaba ndingayihombisa indlu yam ngeRamadan?
Njani iBhanki Islam usebenzisa DuitNow?
Yintoni eyenza i-mosque ibe yi-mosque?
Ziziphi izinto ezikhokelela ekusasazekeni ngokukhawuleza kobuSilamsi?
Ngawaphi amasebe amabini amaSilamsi?
Ngaba ukuthenga itikiti lelotho yiHaram kwiSilamsi?
Eyona mpendulo: Ngaba kufuneka unxibe i-hijab ukuba unempandla?
© 2022 iklabhu yamaSilamsi
QAPHELA KUBAPHATHI OKULUNGILEYO! Zonke izixhobo eziposwe kwisiza ngokungqongqo ngenjongo yolwazi kunye nemfundo! Ukuba ucinga ukuba ukuthunyelwa kwayo nayiphi na imathiriyeli yophula ilungelo lakho lokushicilela, qiniseka ukuba uqhagamshelane nathi ngefomu yoqhagamshelwano kwaye izinto zakho ziya kususwa!